ओलीले देलान् दाहाललाई एकल अधिकार ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 04:32:09
जापानी समय : 07:47:09
ओलीले देलान् दाहाललाई एकल अधिकार ?
7 September, 2019 13:00 | पत्रपत्रिका | comments | 10800 Views
वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न मात्र सिंगापुर गएको बताए पनि त्यहाँ राजनीतिक स्वास्थ्यको हिसाबकिताबसमेत भएको आशंका गरिन्छ
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा १५ दिनको उपचारपछि शुक्रबार स्वदेश फर्कनेबित्तिकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उनलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पुगेका अध्यक्ष दाहालले यसबीचमा भएको पार्टी कामको औपचारिक जानकारी पनि अर्का अध्यक्ष ओलीलाई दिए ।
विदेश जानुअघि ओलीले पार्टी अध्यक्षका हैसियतले संयुक्त रूपमा गर्दै आएको पार्टी कामको जिम्मेवारी दाहाललाई सुम्पेका थिए । त्यही जिम्मेवारीअनुसार आफूले गरेका कामबारे उनले ओलीलाई सूचित गरे ।
अब पार्टी कामको एकल जिम्मेवारी दाहालले नै पाइरहन्छन् कि त्यसमा ओलीको पनि पूर्ववत् साझेदारी रहन्छ ? नेकपाका धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा चाल्ने कदमलाई चासोपूर्वक नियालिरहेका छन् । उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि ओलीले सरकारतर्फ आफूले बढी ध्यान दिने र पार्टी काममा दाहालको भूमिका मुख्य हुने धारणा पार्टी सचिवालय बैठकमा राखेका थिए । अब यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो सत्तारूढ वृत्तमा छ ।
‘पार्टीलाई समझदारीअनुसार सहज ढंगले अघि बढाउन आपसी आशंकाहरूलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ,’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘अध्यक्षहरूले आ–आफ्ना भूमिकालाई कार्य विभाजन गरेर अघि बढ्दा पार्टी र सरकारले गति लिने अवस्था हुन्छ ।’ गजुरेल र उनीजस्ता पूर्वमाओवादी नेताहरू ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीको कमान्ड दाहालले सम्हाल्न पाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ फागुन ७ मा एकता हुँदा नेतृत्व र सरकार आलोपालो चलाउने सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमतिमा पार्टी बैठकहरूको आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र एउटा अध्यक्षले आधा अवधि सरकारको नेतृत्व गरेपछि बाँकी कार्यकाल अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । तर विगत १५ महिनाको अवधिमा सचिवालय, स्थायी समितिका बैठक संयुक्त रूपमा दुई अध्यक्षले चलाए, आलोपालो भएन ।
साढे दुई वर्षपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुने हो कि नहुने हो, त्यसको टुंगो छैन । त्यसैले यो बीचमा पार्टीभित्रको भूमिकामा आफूलाई बढ्ता जिम्मेवारी दिनुपर्ने दाहालको चाहना देखिन्छ, जसलाई ओलीले सिंगापुर जानुअघि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेका थिए । ‘विश्वासको नयाँ वातावरण बनाएर जानुपर्छ । यसको वातावरण आगामी बैठकहरूबाट बन्दै जानु राम्रो हुन्छ,’ दाहालनिकट नेता गजुरेलले सांकेतिक रूपमा टिप्पणी गरे ।
पछिल्लो समय ओली केही बिरामी हुनुका साथै उनीविरुद्ध पार्टीको शीर्ष तहमै मोर्चाबन्दी भएको थियो । त्यो अवस्थामा उनले अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीतर्फको अधिकार सुम्पेर नयाँ शिराबाट सहकार्य गर्न खोजेजस्तो देखिएको थियो । तर १५ दिने उपचारबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री पूर्ण तन्दुरुस्त भएको र उनले वि श्राम लिनुपर्ने अवस्था नआएको उनीनिकट नेताहरूले सन्देश प्रवाह गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल सिंगापुर नै गए । ओलीलाई पार्टीभित्रबाटै मनोबल थप्न उनीहरू सिंगापुर पुगेका थिए । त्यहाँबाट सँगै फर्केका महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली अब स्वस्थ रहेको र नियमित काम पूर्ण रूपमा गर्न सक्ने अवस्थामा भएको बताए ।
‘पार्टीभित्रको एउटा औपचारिकताका लागि पनि अध्यक्ष बिरामी हुँदा भेट्न जानु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । त्यसैले हामी सिंगापुर गएका हौं,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘यसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्नु पर्दैन ।’ पौडेलले सिंगापुरमा ओलीसँग शारीरिक स्वास्थ्यलाभको आदानप्रदान मात्र भएको दाबी गरे पनि नेकपाका अन्य नेताहरू त्यहाँ राजनीतिक स्वास्थ्यको हिसाबकिताब पनि भएको आशंका गर्छन् ।
अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिने विषयमा तत्कालीन एमालेको ओली पक्ष उदार छैन । एकता हुँदा संयुक्त अध्यक्ष रहने भन्ने सहमति भएकाले बीचैमा एकजना अध्यक्षलाई मात्र अधिकार हस्तान्तरण गर्नु जायज नहुने ओली पक्षको भनाइ छ । ‘सुरुमा आलोपालो भनिए पनि पछि संयुक्त अध्यक्षता गर्ने समझदारी भयो र त्यही समझदारीअनुसार पार्टी चलिरहेको छ,’ ओली पक्षधर एक नेताले भने, ‘पार्टीको महाधिवेशन नहँॅदासम्म यसभन्दा फरक ढंगले जान सकिँदैन ।’
तत्कालीन एमालेमै हुँदादेखि ओलीको कार्यशैली ख्याल गरेका नेकपाका अन्य नेताहरू पनि दाहालले अहिले सहजै पार्टी अध्यक्षको पूर्ण अधिकार पाइहाल्छन् भन्ने विश्वास गर्दैनन् । ‘हाम्रा अध्यक्ष ओलीले आफूमा भएको शक्ति अरूमा दिनुभयो भने त्यो नयाँ कुरा हुनेछ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले भने ।
काम र जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँट भएको अवस्थामा भने पार्टी सहज रूपमा चल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेकपाभित्रको जे चुनौती छन्, ती सामना गर्दा माथिदेखि तलसम्म संस्थागत रूपमा पार्टी र नेताहरूको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी तय हुनुपर्छ,’ नेता भुसालले भने, ‘यो दिशामा जाने गरी अध्यक्षबाट प्रस्ताव आयो भने स्वागतयोग्य हुन्छ । होइन भने फेरि पनि अल्मलिने, भागबन्डामै चलिराख्ने स्थिति हुन्छ ।’
गत पुसमा भएको स्थायी समिति बैठकमा ‘एक व्यक्ति एक पद’को अवधारणा लागू हुनुपर्ने भन्दै नेता गौतमले अध्यक्ष ओली र सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै १६ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यो बेला पार्टी काम र सरकारको नेतृत्व दुई अध्यक्षले बाँडफाँट गर्नुपर्ने गौतमको प्रस्ताव थियो । ओली सिंगापुर जानुअघिको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा नेता माधव नेपाल पनि एक व्यक्ति एक पद भन्ने विन्दुमा पुगे । तर पछिल्लो समय उनको प्रस्तावप्रति गौतम मौन बसेका छन् ।
निकै लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेका गौतमलाई फकाउन यसबीचमा ओलीले विधानमै नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने निर्णय सचिवालयबाट गराएका छन् । पछिल्लो पटक ओलीले लगाएको गुनका कारण पनि गौतम अहिले दाहाललाई एकल अधिकार दिनैपर्छ भन्ने अडान राख्न सक्ने अवस्था छैनन् ।
बरु तत्कालीन एमाले धारबाट ओलीपछिको मुख्य नेता आफू रहेको स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्, जसलाई उनले पार्टीको सैद्धान्तिक विवादमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को पक्ष लिँदै बहसमा उत्रिएका ईश्वर पोखरेललाई समेत खुसी पार्ने गरी ‘जबज’को पक्षमा लेख लेखेर साथ दिए । त्यसपछि गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनमा पोखरेलको पनि साथ रह्यो र पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउनमा गौतमले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि सहमत गराए ।
सम्भवतः अब उपाध्यक्ष गौतमको दृष्टि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको कास्कीको निर्वाचन क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ । ‘उहाँ त्यहाँबाट उपनिर्वाचन लडेर, जितेर एकपटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ,’ अघिल्लो निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतमको मनस्थिति बुझेका एक नेताले उल्लेख गरे ।
यद्यपि उपाध्यक्ष गौतमको सत्तारोहण चाहनाबारे ओली र दाहालको भित्री बुझाइ के हो भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । ओली सिंगापुर जानुअघिको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार नचलेको कुरा उठाएका थिए । एक व्यक्ति एक पदको प्रस्ताव पनि उनले गरेका थिए । नेपालबाट उक्त प्रस्ताव आउँदा दाहालले त्यसप्रति बलियो समर्थन गरेनन् । तर जब ओली सिंगापुर उडे, त्यसपछि दाहाल र नेपालबीच भेटघाट बाक्लिएको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा पूर्वएमाले पक्षधर केही नेताहरू भने ओली र नेपाल धारलाई नजिक्याउने कसरतमा पनि छन् । ओली र नेपालबीच फाटोबढ्दा दाहाल पार्टीमा हावी हुन सक्ने भय उनीहरूलाई छ ।
यी सबै विषय अब कसरी अघि बढ्छ, लगत्तै हुने स्थायी समिति बैठकमा त्यसको दृश्य देखिनेछ । हालै अध्यक्ष दाहालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा तत्कालै स्थायी समिति बैठक बस्ने उल्लेख छ । बैठकमा गौतमको उपाध्यक्ष पदका लागि विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने एजेन्डा पनि छ ।
गौतमको उपाध्यक्ष पदका लागि विधान संशोधन गर्न खोज्दा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको कुरा पनि जोडका साथ उठाउने तत्कालीन माओवादी पक्षधर नेताहरूको तयारी छ । सत्तारूढ नेकपाको यो आन्तरिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।